वाई-फाई राम्रोसँग चलेन ? यस्ता छन् समाधानका ११ उपाय – NawalpurTimes.com
वाई-फाई राम्रोसँग चलेन ? यस्ता छन् समाधानका ११ उपाय
प्रकाशित : २०७८ साउन ३२ गते १०:३०
काठमाडौं । केही समयका लागि घरमै बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा अनलाइन क्लास भइरहेको छ । तर इन्टरनेट स्पिडमा समस्या देखिँदा हैरान हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो वाई-फाईलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ । आज हामी तपाईंलाई आफ्नो वाई-फाईमा देखिने समस्या हटाउने केही उपायहरुको बारेमा बताउँदै छौं ।